Ezumike na Spain | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Ememe na Spain
Ndị na-agakarị na ebe ntụrụndụ ụwa a ma ama, obi abụọ adịghị ya na ha anaghị agafe mba ndị dị ịtụnanya dị ka Spain. Ezumike n'akụkụ nkuku ụwa a bụ ebe ntụsara ahụ kachasị mma! Mba a nweburu mmeri ịhụnanya nke ndị njem maka ọrụ ya na-enweghị atụ na osimiri mara mma.
Eziokwu maka na ọnụ ahịa maka ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ na Spain, ọbụna n'oge ọnụ ọgụgụ kasị elu ebe a, na-agba ume. Dabere na ọtụtụ ndị na-ahụ maka njem, nlegharị anya na Spain, nke jikọtara ọtụtụ ihe n'otu oge, bụ ihe a ma ama n'etiti ndị ezumike taa - nke a bụ ezumike osimiri, na njem mmụta, wdg.
Ọ dị mma ịmara na ọnụahịa ha, yana nhọrọ ziri ezi, ga-anabata ndị njem dị iche iche ga-anabata. Mana, na agbanyeghị, taa ọtụtụ nwere ike ịnọchite anya mba a dị ebube naanị n'ụcha agba, ha kwenyere na ọ bụghị ihe ezi uche dị na ha ịhụ ya. Ọ bụ ezie na n'eziokwu, ọtụtụ n'ime anyị nwere ike ịga Spain, ma n'otu oge ahụ anyị enweghị mkpa itinye mgbakwunye.
Okwesiri iburu n’uche iche na ọtụtụ ndị bara ọgaranya na obodo a na-ahọrọ itinye ezumike ma ọ bụ ụfọdụ ụbọchị kalenda nke dị ha mkpa. Ha na-eji ego ego, ma na-anata ihe agaghị echefu echefu na ọnọdụ okomoko. Ọtụtụ ndị njem chọrọ ileta Spain ọ bụghị naanị n’oge ọkọchị kamakwa n’oge oyi. Oge ezumike dị otú ahụ nwekwara ọmarịcha ya.
Enwere otu ndi mmadu ndi choro na njem ha iguta ihe ndi kacha nta. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ha, mgbe ahụ ị ga-enwe mmasị na saịtị nke ị nwere ike ịgbakọ njem ọ bụla. Dị ka ọ na-adị, na weebụsaịtị ndị dị otú ahụ enwere ọchụchọ ntanetị pụrụ iche nke ị nwere ike ịchọpụta njegharị ị nwere mmasị na ya ma ọ bụ chọta nchịkọta nke ikpeazụ. Iji interface a nwere ike ịchekwa ezigbo ego na njem. E kwuwerị, ị nwere ike ịchọta njem dị ọnụ ala, dịka ọmụmaatụ, na otu Spain.
A na-ejikarị usoro a, ọ bụghị naanị site na ndị njem na-eme njem, kamakwa site na ụlọ ọrụ niile na-eji obere njem gaa mba ọzọ na-arụsi ọrụ ike iji mee ka mmụọ ụlọ ọrụ ha dị elu ma na-ahọrọkarị ezumike na Spain.
Otu ihe dị mkpa nke ndị njem nleta na-ahọrọ Spain dị ka honiimuum. A sị ka e kwuwe, ezumike dị ka ụbọchị ezumike dị ka ụbọchị dị ọhụrụ, dị ka agbamakwụkwọ n'onwe ya.
Nke a bụ ihe ndị lụrụ di na nwunye ọhụrụ na-eduzi, na-ahọrọ ọmarịcha ebe na-agaghị echefu echefu, nke otu n'ime ọtụtụ ebe ntụrụndụ na Spain nwere ike ịbụ.
Ihe na njem na njem
Ajuju 22 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,301.